Torohevitra Pipette, fampiasa PCR, tavoahangy reagent - ACE
Makà santionany maimaimpoanaMandehana
♦ Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd. dia orinasa matihanina manolo-tena hanome plastika azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny plastika azo ampiasaina amin'ny hopitaly, tobim-pitsaboana, laboratoara fitiliana ary laboratoara fikarohana siantifia.
♦ Manana traikefa betsaka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny plastika amin'ny siansa fiainana izahay ary mamokatra ny zava-bita biomedika azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana sy ny mpampiasa. Ny vokatray rehetra dia novokarina tao amin'ny efitrano fidiovana 100 000. Mba hiantohana ny kalitao tsara indrindra mifanaraka amin'ny mihoatra ny fenitry ny indostria dia tsy misy afa-tsy ireo akora virjiny tsara kalitao avo indrindra hampiasana ny vokatray…
hijery ny serivisy lehibe
Manokana amin'ny faritra medikaly sy biolab avo lenta
Tendron'ny CO-RE Hamilton STAR
96 Takelaka PCR
Tecan LiHa RSP Torohevitra
Tecan MCA Torohevitra
350ul 96 Vilia boribory boribory V ambany
350ul 96 Loza boribory boribory U ambany
Hatramin'ny nanombohany, ACE dia nanolo-tena hanamboatra sy hamatsy fanafody sy laboratoara avo indrindra ho an'ny mpanjifanay.
Tanjon'ny asa fanompoana
1. Manome teknolojia famokarana mandroso
2. Manolora teny nalaina nifaninana
3. Omeo serivisy tsara aorian'ny fivarotana
Injeniera efa za-draharaha avokoa ny vokatray rehetra.
Ireo mpanjifantsika any amin'ny firenena 20 mahery.
OEM SERVICE SY AUTOMATION
Hamolavola / Fitaovana
avy amin'ny adminAug-24-2020
Takelaka fantsakana lalina
ACE Biomedical dia manolotra mikroplates lalina tsy misy fatra ho an'ny fampiharana fikarohana biolojika sy zava-mahadomelina. Ny mikroplates lalina dia kilasy manan-danja amin'ny plastika miasa ampiasaina amin'ny fanomanana santionany, fitehirizana fitambarana, fampifangaroana, fitaterana ary fanangonana ampahany. Izy ireo ...
Atao ny pipet sivana ...
Ao amin'ny laboratoara dia misy fanapahan-kevitra hentitra raisina hamaritana ny fomba tsara indrindra hanaovana andrana fitsapana sy fitsapana. Rehefa mandeha ny fotoana, ny torohevitra momba ny pipette dia nifanaraka tamin'ny laboratoara erak'izao tontolo izao ary manome fitaovana mba hahafahan'ny teknisiana sy ny mpahay siansa manao fikarohana manan-danja. Manokana ity ...
Thermomet sofina ve ...
Ireo thermometre sofina infrared izay nanjary nalaza tamin'ny dokoteran-jaza sy ny ray aman-dreny dia haingana sy mora ampiasaina, saingy marina ve izany? Ny famerenana ny fikarohana dia milaza fa mety tsy misy izy ireo, ary na dia somary kely aza ny fiovan'ny maripana dia afaka manisy fiovana amin'ny fomba fitsaboana ny zaza izy ireo. Resea ...
Nandritra ny ezaka maharitra nandritra ny taona vitsivitsy lasa, ny ACE dia nanjary iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy entana azo ampiasaina manerantany ho an'ny laboratoara sy ny fitsaboana. Hanome toky hatrany ny mpanjifanay amin'ny vokatra sy serivisy tsara indrindra izahay.